I-China MS-DN25C I-TWISTING MACHINE Ukukhiqiza kanye Nemboni |Mingshu
Ukuqhathanisa nezici zamamodeli ahlukene emishini
Izinhlobo ezahlukene zomshini olawulwa yi-torsion kanye ne-twist:
I-HBMS ihlinzeka ngezinhlobo ezintathu ezihlukene zemishini yokusonta insimbi edayiswayo: MS-DN25A, MS-DN25B kanye ne-MS-DN25C.
Umehluko womshini ngamunye.
I-MS-DN25A iwuhlobo oluyisisekelo, ingasonta insimbi eyisicaba, insimbi yesikwele, insimbi eyindilinga.Ingakwazi ukusonta izinsimbi zensimbi ezinobude ukusuka ku-200mm ukuya ku-800mm zibe yisimo se-pretzel.Ngaphandle kwalokho, umshini wethu ungasonta izinsimbi ezinobude obungaphezu kuka-800mm ngamasegimenti.
Uma kuqhathaniswa ne-MS-DN25A, i-MS-DN25B inayo yonke imisebenzi yayo.Ngaphezu kwalokho, sisanda ngeza imisebenzi yokusonta amashubhu ayisikwele futhi senze amakheji(izinto ezine).Imisebenzi yayo iphelele futhi imikhiqizo miningi kakhulu.
I-MS-DN25C inguqulo ethuthukisiwe ye-MS-DN25B.Ayinayo yonke imisebenzi ye-MS-DN25B kuphela, kodwa futhi yengeza ikhono lokucubungula amakheji (akhuphukele ezintweni eziyisishiyagalombili).Isigaba somkhiqizo wayo siningi kakhulu, esiphethe lo Mshini, yonke imisebenzi iyatholakala.
Ukusebenza Kwebhasikidi okungu-4
8-post Ukusebenza Kwebhasikidi
Kunamathiselwe i-Mold Qty
Ijubane lokuphotha elilinganayo
Ukulawulwa kohlelo, izilungiselelo zohlelo zingalungiswa ngokuya ngezidingo ezahlukahlukene ukuze kuzuzwe imiphumela ehlukene yomkhiqizo
Ifakwe ukulawula okwenziwa ngesandla kanye nokushintshwa kwezinyawo, isenzo sokucubungula singaphinda.
Isivinini sokucubungula okusheshayo
Kungani ukhetha umshini we-HBMS?
1. Izinto zokwakha zekhwalithi ephezulu kanye nemishini yokucubungula eyinkimbinkimbi ikhiqize imishini yekhwalithi ephezulu amakhasimende angayisebenzisa ngokuzethemba.
2. Umuzwa wokuklama ocebile nemishini yokuzenzela kuwukuzethemba kwethu ukunikeza amakhasimende isevisi yekhwalithi ephezulu ngemva kokuthengisa kanye nesiqondiso sokuthuthukiswa kobuchwepheshe.
3. Idizayini yesakhiwo enengqondo ivumela amakhasimende ukuthi asebenzise futhi abuyisele isikhunta ngendlela efanele.
4. Ukulawula uhlelo, ukonga izindleko zabasebenzi.
5. Okuhlangenwe nakho okucebile ekukhiqizeni umkhiqizo kunganikeza isiqondiso sobuchwepheshe kumakhasimende ukucubungula imikhiqizo.
Kuyo yonke le minyaka, i-HBMS izabalaza ukuba ngumkhiqizi wemishini yensimbi eyenziwe uchwepheshe.Sinikeza umshini wekhwalithi ephezulu olawulwa yi-torsion nomshini wokusonta ngentengo yokuncintisana.Khetha i-HBMS, ngeke uzisole!
Okwedlule: UMSHINI WE-MS-DN25B
Olandelayo: I-MS-DY16 i-hydraulic forming machine